विदेशबाट आएका पर्वत र बाग्लुङका २२७ होम क्वारेन्टाइनमा
अबला लोकतन्त्र !
तर्सिन थाले चिकित्सक : बिरामी र आफन्त पनि तनावमा
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 1 week ago March 27, 2020
कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिन पर्वतमा विदेशबाट फर्केकाको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ भने फर्केकामध्ये १८२ जनालाई होम क्वारेन्टइनमा राखिएको छ ।
पर्वत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह र ६१ वटै वडामा वैदेशिक रोजगारीबाट चैत १ गतेदेखि पछिल्लो समयसम्म आएकाको खोजी कार्य जारी राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १८२ जना सम्पर्कमा आएका छन् ।
उनीहरु प्रत्येकको घरमा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चै ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । प्रजिअ नेपालका अनुसार विदेशबाट फर्किएकामा अहिलेसम्म कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नदेखिए पनि उनीहरुलाई घरमै पुगेर सुरक्षित बस्न आग्रह गरिएको छ ।
बाग्लुङमा ४५ जना ‘होम क्वारेण्टाइनमा’
बाग्लुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ४५ जनालाई ‘होम क्वारेण्टाइन’मा पठाइएको छ । कोरोना भाइरसप्रभावित देशबाट घर फर्किएकाहरुलाई स्थानीय सरकार र जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिको पहलमा घरमै सुरक्षित बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जिल्ला सवारी पासलाई समेत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्र पन्तले बताउनुभयो । कोरोनाका बारेमा सत्यतथ्य पुष्टि भएको खबर मात्र सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्ने र गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको पन्तले बताउनुभयो ।
‘खानेपानी नै छैन, के ले हात धुने ?’
कोरोना भाइरसले गरायो परिवारको मिलन
नेपाली ध्वजावाहक विमानबाट अष्ट्रेलिया पुगेका नेपालीले भने- ‘गर्वले छाती फुल्यो’
धर्तीमा भोलि मानव नरहन पनि सक्छ